OMG! आमाबुवाको निधन भएको ४ वर्षपछि बच्चा - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडाैं । चीनमा कार दुर्घटनामा परी दिवङ्गत भएको एउटा दम्पतीको चार वर्षपछि सन्तान जन्मिएको छ।
बच्चा जन्माइदिनका लागि कोख भाडामा दिने आमा ‘सरोगेट मदर’ मार्फत् ती बच्चाको जन्म भएको चीनका सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
लाओकी ‘सरोगे’ आमामार्फत् यी बालकको जन्म गत डिसेम्बरमा भएको थियो। यसबारे ‘द बेइजिङ न्यूज’ले समाचार यही साता प्रकाशित गरेको छ।
यस्ता घटनाहरू पहिला भएको उदाहरण नहुँदा त्यो दम्पतीका बाबुआमाले सरोगेसीको प्रक्रिया सुरु हुनुअघि कस्तो खाले कानुनी झमेलामा पर्नुपर्‍यो भनी उक्त पत्रिकाले व्याख्या गरेको छ।
याे पनि पढ्नुस चिनियाँ ऋणमा बन्न लागेका ३ मेगाप्रोजेक्ट रद्द गर्ने महाथिरको घोषणा
कानुनी लडाइँले ती बालकका घर र मावलीतर्फ गरी चारै जना बाजेबजै ती भ्रूणको अधिकार पाएका थिए।
समाचारहरूका अनुसार उनीहरूले आफ्ना सन्तानको भण्डारण गरिएका भ्रूणहरू लिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुनै नजिर थिएन।
आफ्नो वंशले निरन्तरता पाउने भयो भनेर उनीहरू उत्साहित छन्।
अन्ततस् उनीहरूलाई आफ्ना सन्तानको भ्रूणको अधिकार दिइयो। तर त्यसलगत्तै अर्को समस्या आइलाग्यो।
याे पनि पढ्नुस फेरि किन पुगें उत्तरकोरियाली नेता किम जोङ अन सीलाई भेट्न चीन
नान्जिङ अस्पतालले अर्को अस्पतालले पनि त्यसैगरी भ्रूणलाई जोगाएर सुरक्षित राख्छ भन्ने प्रमाण भए मात्रै उनीहरूलाई लैजान दिइने बतायो।
चीनमा सरोगेसी गैरकानुनी भएकोले एउटै यथार्थपरक विकल्प भनेको देशबाहिर खोज्नु थियो।
अन्ततः मृत दम्पति भविष्यका बा हजुरबुवा हजुरआमाले व्यापारिक सरोगेसी कानुनी रूपमा सञ्चालन हुने लाओस्थित सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउने संस्थाको सम्पर्कमा पुगे।
कुनै पनि एयरलाइनले तरल नाइट्रोजनको थर्मो आकारको बोतललाई लैजान नमानेपछि कारले कार्गो गर्‍यो।
याे पनि पढ्नुस चीनमा लामो दाह्री पाल्न र अनुहार ढाक्न नपाइने !
‘टियन्टियन्’ नाम दिइएका बालकको नागरिकताबारे जटिलता आउनसक्छ।
किनभने उनी लाओमा नभएर एउटा साधारण पर्यटक भिसामा सरोगेट आमा चीनमा भएका बेला जन्मिएका थिए।
पितृत्वको प्रमाण दिन अभिभावकहरू छैनन्।
चारै जना बाजेबजैले उनलाई रगत दिनुपरेको थियो। त्यो बच्चा आफ्नै नाति भएको र उनका बाबुआमा दुवै चिनियाँ नागरिक थिए भनेर उनीहरूले डीएनए परीक्षण गराएका थिए। बीबीसी